China Materialgbọ mmiri Akụrụngwa Bonding rụpụta na Factory | Akwa Ugbo
Polyurethane nyagide maka ụgbọ ihe onwunwe bonding
Isi ihe siri ike 100: 25
Gluing usoro: ntuziaka squeegee
Youxing Shark na-elekwasị anya na nkà na ụzụ ọhụrụ na itinye ihe pụrụ iche maka ụgbọ mmiri. Ọ nwere ọtụtụ afọ nke nyocha teknụzụ na ahụmịhe mmepe na usoro njikọta ọnụ na njirimara nke efere ọla, ajị ajị anụ, ụgbụgbọ mmanụ a aluminumụ aluminom, ụgbụgbọ mmanụ a andụ akwụkwọ na ihe ndị ọzọ ejiri mee ihe maka mma ụgbọ mmiri. Akwụkwọ nkwadoro ụlọ ọrụ mmekọrịta ọha na eze.
ụgbọ ihe njikọ
agba ígwè efere, agba aluminom na efere ndị ọzọ
nkume ajị, aluminom n'ụgbụgbọ mmanụ abụ
Mejupụtara oké nkume ajị osisi mee nke kpaliri mkpa ígwè mpempe akwụkwọ, ịkwanyere plastic ji achọ film, nrapado na nkume ajị. Kpọtụrụ, bọọdụ ajị anụ a na-ejikọ ọnụ bụ ụdị ajị ajị anụ na-agbanye otu ọkpụrụkpụ n’agbata ọkwa abụọ nke 0.7 mm nke nwere mbadamba ígwè. Ibu ibu nke ọ bụla mejupụtara nkume ajị osisi bụ 19kg. The njikọ ụdị n'etiti osisi na osisi adopts njikọ ụdị a-ụdị osisi na c-ụdị board.It a tumadi ekewet nke bonding oyi akwa, mkpuchi oyi akwa, plasta oyi akwa, gụchara oyi akwa na accessories.The bonding oyi akwa bụ nke ụlọ , nke dị n’agbata ala ala na elu ala. Ejiri njikọ dị elu na nke ala jikọtara ya na ihe na-agba ume. Isi mkpuchi nke ihe nzacha bụ ihe na-adịghị edozi ahụ. Oyi akwa mkpuchi iji zere ma belata ọnwụ nke ikpo ọkụ uzuoku na gburugburu ebe obibi, ihe mkpuchi mkpuchi ihe mkpuchi nke etinyere na elu nke igwe uzuoku na pipụ na-juputara na nkume A ga-eji akwa ajị anụ mee ya na akwa mkpuchi, arụ ọrụ mkpuchi, ma ọ bụ agba mmiri na-acha mmiri na mpụga nke nwere oke ikuku ikuku, nke mere na nkume ahụ mejupụtara woollọ ajị anụ na-ejigide ịdị arọ ya ma na-eme ka ọ dị mma. N'otu aka, agba nke elu nke ogwe osisi ajị anụ a na-agbasawanye, ka e wee tinye ya na gburugburu ebe obibi ọ bụla, mkpuchi ahụ nwere ike ịbụ ire ọkụ na-echekwa ọkụ ruo n'ókè ụfọdụ.
High bonding ike
Ọ nwere ike hụ na mbadamba agaghị ịgbawa na degummed mgbe bonding. Ike ọdụdọ ≥6Mpa (aluminom efere glued na aluminom efere).
Oru oma nke oma
Obere ọrụ oghere, arụmọrụ dị elu, nrụpụta dị mma, na-enyere ndị ahịa aka imeziwanye arụmọrụ ma belata ọnụahịa mmepụta.
Ọ nwere ike izute oge ọrụ ogologo oge nke ndị ọrụ chọrọ na usoro mmepụta nke ihe ụgbọ mmiri.
Pressingpị ọkụ na 90-100 Celsius C maka oge 2 iji gwọọ ngwa ngwa, nke dị mma maka ndị ọrụ iji rụọ ọrụ ma mee ka ndị ahịa rụọ ọrụ nke ọma.
Nke gara aga: Water Based nrapado N'ihi Softwood Woodworking
Osote: Fire gosiri Door ihe onwunwe Bonding